NewZealandCoin စျေး - အွန်လိုင်း NZC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NewZealandCoin (NZC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NewZealandCoin (NZC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NewZealandCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NewZealandCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NewZealandCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NewZealandCoinNZC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000008NewZealandCoinNZC သို့ ယူရိုEUR€0.000007NewZealandCoinNZC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000006NewZealandCoinNZC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000007NewZealandCoinNZC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00007NewZealandCoinNZC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00005NewZealandCoinNZC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.000172NewZealandCoinNZC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00003NewZealandCoinNZC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00001NewZealandCoinNZC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00001NewZealandCoinNZC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.000177NewZealandCoinNZC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00006NewZealandCoinNZC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00004NewZealandCoinNZC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.000585NewZealandCoinNZC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0013NewZealandCoinNZC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00001NewZealandCoinNZC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00001NewZealandCoinNZC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.000242NewZealandCoinNZC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00005NewZealandCoinNZC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.000823NewZealandCoinNZC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.0093NewZealandCoinNZC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.00296NewZealandCoinNZC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.000573NewZealandCoinNZC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.000217
NewZealandCoinNZC သို့ BitcoinBTC0.0000000007 NewZealandCoinNZC သို့ EthereumETH0.00000002 NewZealandCoinNZC သို့ LitecoinLTC0.0000001 NewZealandCoinNZC သို့ DigitalCashDASH0.00000009 NewZealandCoinNZC သို့ MoneroXMR0.00000009 NewZealandCoinNZC သို့ NxtNXT0.000654 NewZealandCoinNZC သို့ Ethereum ClassicETC0.000001 NewZealandCoinNZC သို့ DogecoinDOGE0.00224 NewZealandCoinNZC သို့ ZCashZEC0.00000009 NewZealandCoinNZC သို့ BitsharesBTS0.000301 NewZealandCoinNZC သို့ DigiByteDGB0.000298 NewZealandCoinNZC သို့ RippleXRP0.00003 NewZealandCoinNZC သို့ BitcoinDarkBTCD0.0000003 NewZealandCoinNZC သို့ PeerCoinPPC0.00003 NewZealandCoinNZC သို့ CraigsCoinCRAIG0.00365 NewZealandCoinNZC သို့ BitstakeXBS0.000341 NewZealandCoinNZC သို့ PayCoinXPY0.00014 NewZealandCoinNZC သို့ ProsperCoinPRC0.001 NewZealandCoinNZC သို့ YbCoinYBC0.000000004 NewZealandCoinNZC သို့ DarkKushDANK0.00257 NewZealandCoinNZC သို့ GiveCoinGIVE0.0173 NewZealandCoinNZC သို့ KoboCoinKOBO0.00182 NewZealandCoinNZC သို့ DarkTokenDT0.000007 NewZealandCoinNZC သို့ CETUS CoinCETI0.0231
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 04 Aug 2020 20:45:02 +0000.